Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na France » WTTC: Ngalaba njem na njem nlegharị anya na France ga-agbake ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ atọ n'afọ a
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Ụgbọ ala mgbazinye • Ịtụ egwu • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • nzukọ • News • ndị mmadụ • Rail njem • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Safety • Ịzụ ahịa • isiokwu Parks • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
WTTC: Ngalaba njem na njem nlegharị anya na France ga-agbake ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ atọ n'afọ a.
WTTC kwuru na uto ngalaba nke afọ a ka atọrọ ka ọ ga-arị elu tupu mgbake Europe n'ozuzu ya na 23.9%, na mgbake zuru ụwa ọnụ na 30.7%.
A na-atụ anya na France ga-eweghachi mpaghara njem na njem nlegharị anya n'ihu UK na Europe.
Ọ bụrụ na agbasoro usoro ndị dị mkpa, ngalaba njem na njem nlegharị anya nwere ike ịhụ ọnụọgụ ọrụ karịrị ọkwa ọrịa butere tupu 2022.
N'afọ 2019, ntinye aka na njem France na njem nlegharị anya na GDP nọchiri anya ijeri euro 211 (8.5% nke akụ na ụba mba).
Nnyocha ọhụrụ sitere na World Travel & Tourism Council (WTTC) na-ekpughe na mgbake mpaghara njem na njem nlegharị anya nke France nwere ike nweta uto nke 34.9% n'afọ a.
Akụkọ ahụ na-abịa n'ụbọchị WTTC, nke na-anọchite anya ngalaba njem na njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ, ndị otu ya, na ndị isi azụmahịa si gburugburu ụwa, na-aga Paris maka nzuko France Destination.
Onye isi ala Emmanuel Macron haziri ma jiri okwu mmeghe si WTTC Onye isi oche na Onye isi oche & Onye isi oche nke Carnival Corporation & plc, Arnold W. Donald, ihe omume a ga-elekwasị anya na ịkwọghachi ndị njem na ebe ha na-aga nke tupu ọrịa a, bụ ebe kachasị ewu ewu n'ụwa.
WTTC na-ekwu na uto ngalaba nke afọ a ga-arị elu tupu mgbake Europe n'ozuzu ya na 23.9%, na mgbake zuru ụwa ọnụ na 30.7%.
Na 2019, FranceEnyemaka ngalaba njem na njem nlegharị anya na GDP nọchiri anya ijeri euro 211 (8.5% nke akụ na ụba mba).
N'afọ 2020, mgbe ọrịa ahụ butere njem mba ofesi kwụsịtụ, ntinye aka nke ngalaba njem na njem nlegharị anya dara naanị ijeri euro 108 (4.7% nke akụ na ụba mba).
Otú ọ dị, dị ka nchọpụta ọhụrụ, na ọnụego mgbake ugbu a, FranceNgalaba njem na njem nlegharị anya nwere ike ịtụ anya uto otu afọ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 35%, na-anọchi anya mmụba nke ijeri euro 38.
Ihe omuma a gosiputara na obodo ahu nwere ike ihu otu afo na abawanye nke 21.8% na 2022, na-enye aka n'ihu na onodu aku na uba nke ijeri euro 32.
Otu na-ahụ maka njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ na-ekwu na n'agbanyeghị ịrị elu nke njem ụlọ enyela mba ahụ ụfọdụ ahụ efe, o zughị ezu iji nweta mgbake zuru oke chọrọ iji chekwaa akụ na ụba ya na nde ọrụ ndị funahụrụ n'ihi ọrịa COVID-19.